Asus र LG स्मार्ट बैटरी केस को मजाक आईफोन समाचार
एप्पलको पावरकेसको विश्वमा आगमनले धेरै विवादास्पद सिर्जना गरेको छ, जे होस्, न कि प्रत्येक पटक एप्पलले उत्पादन सुरू गरे भन्दा कम होस्। उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्सको विश्वमा विश्वको अग्रणी कम्पनीको रूपमा, यसको प्रत्येक नयाँ विज्ञप्तिलाई म्याग्निफाइ। ग्लासको साथ हेरिएको छ। तथाकथित स्मार्ट ब्याट्री केस प्रशंसा र उपहासको विषय भएको छ, विशेष गरी चिच्याउने यदि हामीले यसको "जिज्ञासु" हंचब्याक डिजाइनलाई ध्यानमा राख्यौं भने। ब्याट्रीले आईफोन and र आईफोन s एस उपकरणहरूको लागि महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्दछ र आईओएसको साथ निर्बाध एकीकृत गर्दछ ब्याट्री स्तर प्रदर्शन गर्न। अन्तिममा आलोचनामा सामेल हुनेहरू एलजी र आसुस रहेका छन्, तिनीहरू पहिलो होइनन न त तिनीहरू एक्ला कम्पनी हुन् जसले विज्ञापन अभियान सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिइरहेका छन् जसको प्रक्षेपणको फाइदा लिदैछन् वा उनीहरूले एप्पलको खण्डमा कुनै त्रुटिलाई ध्यान दिन्छन्।
टिम कुकले केहि दिन अघि सted्केत गरे कि यो केस आईफोनको पूरक होईन, तर असाधारण परिस्थितिमा हाम्रो उपकरणको स्वायत्तता बढाउन सहयोगी हो, जुन प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न तरीकाले प्राप्त गरेका छन्। यद्यपि वास्तविकता भनेको केसको सुरुवात एक प्रकारको पुष्टि हो जुन धेरै केसहरूमा ब्याट्री लाइफ वास्तवमै अपर्याप्त हुन्छ। यो Asus र LG बाट दुई विज्ञापन अभियान हो जुन यति विवाद उत्पन्न गर्दैछ, दुबै ट्विटरमा:
तपाइँसँग एक भन्दा अधिक शक्ति हुँदा तपाइँलाई त्यो अतिरिक्त प्याकको आवश्यक्ता पर्दैन। #जेनफोन # म्याक्स pic.twitter.com/McjMJbzij5
- ASUS (@ASUS) डिसेम्बर 9, 2015
उदार सवारी अनुभव गर्नेहरूका लागि मौनताको क्षण। जीवन राम्रो छ। #दहम्प # LGV10 pic.twitter.com/OX9i4Bo4UE
- LG जोर्डन (@LGJordan) डिसेम्बर 9, 2015
निस्सन्देह दुबै नयाँ एप्पल बाह्य ब्याट्री द्वारा प्रस्तुत "हम्प" लाई बुझाउन आउँदछ, साथै सोही अनुसारको ब्याट्री जीवन पनि जुन यी उपकरणहरूमा प्रश्नहरू छन्, ASUS Zenfone अधिकतम र LG V10। यो आशा गरिएको थियो कि अवशिष्ट ध्यान चाहिने धेरै कम्पनीहरू यस प्रकारको अनैतिक विज्ञापनमा उफ्रिनेछन्, यो भर्ती विधिको रूपमा रेफरल उपकरण प्रयोग गरेर ध्यान आकर्षण गर्ने राम्रो समय हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » Asus र LG स्मार्ट ब्याट्री केस को मजाक बनाउँछ
उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्सको विश्वमा विश्वको अग्रणी कम्पनीको रूपमा, यसको प्रत्येक नयाँ विज्ञप्तिलाई म्याग्निफाइ। ग्लासको साथ हेरिएको छ।
आज यदि तपाई पहिले भन्दा धेरै INVOLUNTARY HUMOR बाट उठ्नुभयो भने, मिगुएल।
यो आईफोनको लागि तातो केकको रूपमा बेच्नको लागि एक चीज हो, तर त्यो बाट एप्पल विश्व नेता हुनु, उनीहरूले भने जस्तै यदि तपाईले करिब १००० शहरहरू खर्च गर्नुभयो भने।
ब्रान्डहरू बीचको उपहास यो पुरानो हो जस्तो कि यो हास्यपूर्ण छ। एप्पल, धेरै हिजो पहिले, इंटेल र एएमडीको खिल्ली उडायो, अब यो सबैभन्दा राम्रो आपूर्तिकर्ता हो। तर तपाईको शंकाको लागि मलाई मेरो म्याकबुक प्रो जाँच गर्न दिनुहोस् र ... हो, योसँग इंटेल सीपीयू साथै इंटेल आईरिस 6100१०० छ।
म जोर दिन्छु, यो हास्य संग लिनु पर्छ।
शुभ साँझ «एन्टी रोजगारहरू»: /
अभिवादन र मेरो सबै समाचार मा टिप्पणी को लागी धन्यवाद, यद्यपि यो लाग्छ कि म तपाईंलाई सधैं पढ्न गर्दिन। शुभकामना।
पुनश्च: अग्रणी कम्पनी भनेको सबैभन्दा बेच्ने कम्पनी हो, जुन बेच्दैन, हराउँछ र दिवालिया हुन्छ (उदाहरण नोकिया नेता थियो, अब यो अवस्थित छैन)। तसर्थ, हो, एप्पल एक अग्रणी कम्पनी हो, जुन विश्वमा सब भन्दा मूल्यवान छ (यो मैले भनेको छैनँ, अर्थशास्त्र विज्ञहरूले भने), यद्यपि यसले तपाईंको धेरैलाई तौल गर्न सक्छ।
अभिवादन र साथी पढ्न को लागी धन्यवाद!
हो, मिगुएल, तर तपाईं सामान्य उपभोक्ता ब्रान्डको रूपमा राख्नुहुन्छ। म तपाईंलाई सम्झना गराउँछ कि उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स केवल स्मार्टफोनहरू, डेस्कटपहरू र ल्यापटपहरू, साथै ट्याबलेटहरू मात्र हुन्।
म टेलिभिजनहरू (जहाँ नेता एलजी), क्यामेरा (निकोन र गो प्रो), होम थिएटर (बोस), होम कन्सोल (सोनी), र घरेलु उपकरणहरू (म अब तिनीहरू "स्मार्ट" हो भनेर सहमत छैन) को उल्लेख गर्न सक्छु।
एउटा कोठामा प्रभुत्व जमाउनु र अरुमा उपस्थिति हुनु एक चीज हो (NVIDIA ले मोबाइल गेम बजार खान्दैछ)। तर त्यहाँबाट सबैलाई निद्रा लगाउँनुहोस् कि उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक प्रतिनिधिहरू, लामो टाढा छ।
र्याकिंगको बारेमा, सबै कुरा विश्वास नगर्नुहोस्। LV उत्तम लग्जरी ब्रान्डको रूपमा बाहिर आउँदछ, र उपभोक्ता हुँदाहुँदै पनि, म असहमत छु। हर्मेसको राम्रो फर्स, कार्टियर राम्रो गहना, र पाटेक राम्रो वाचमेकि has छ।
के तपाई मलाई यो भाग व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ?
[…] यो अपेक्षा गरिएको थियो कि अवशिष्ट ध्यान चाहिने धेरै कम्पनीहरूले यस्तो अनैतिक विज्ञापनको प्रकारको सुरुवात गर्‍यो […]
म बिल्कुलै अनैतिक केही देख्छु।
शुभ साँझ फेडेरिको। नैतिकता एक व्यक्तिपरक तत्व हो, कि तपाइँको उत्पादन बेच्न को लागी तपाइँलाई बदनाम गर्न आवश्यक छ, यसको विपरित, यसको मतलब तपाइँको उत्पादन आफै बेच्न को लागी पर्याप्त राम्रो छैन।
र तिनीहरू यसबाट छुटकारा पाउन सही छन्। पहिलो, यसको उपस्थिति को कारण, जुन पूर्ण र बिल्कुल हास्यास्पद छ (र प्याटेन्टहरू जुन तपाईंले अन्य पोष्टहरूमा एउटा बहानाको रूपमा खडा गर्नुभयो, डिजाइन भयानक छ, अवधि) यसको लागि लायक छैन। र यसको अत्यधिक मूल्यको लागि दोस्रो।
त्यसो भए तपाईको «योगदान» जसमा तपाईले ... battery पूर्ण रूपमा आईओएससँग एकीकृत गर्दछ ब्याट्री स्तरहरू देखाउनको लागि »। हेरौं, तपाईको मतलब के हो? त्यो बजारमा अवस्थित केसहरूसँग (आधा मूल्यको लागि) आईफोनले ब्याट्री स्तर सहि देखाउँदैन? यो बिल्ट-इन ब्याट्रीको केस बाहेक अरु केहि होइन, कम्तिमा जुन मलाई थाहा छ। त्यो हो, यसले आईफोनको स्वायत्ततामा थप थप ब्याट्रीको स्वायत्तता थप गर्दछ; ठीक त्यस्तै अन्य कभरहरूसँग जस्तै आधा मूल्य लागत र बजारमा छन् (अमेजनको भ्रमण गरेर तपाईंले यी सबै देख्न सक्नुहुनेछ)।
मेरो लागि यो केस अब लामो छैन जुन मलाई यो डरलाग्दो लाग्यो, जुन यो हो, यो यो हो कि यो सीधा मलाई एक स्क्याम जस्तो देखिन्छ (जसरी एप्पलले हामीलाई तान्न खोज्ने प्रत्येक सामानहरूमा यो हुन्छ (जसको अर्थ केबल्स र कभर) बिल्कुलै मूल्यहरु उत्पादनहरु मा कि तपाई आधा भन्दा कम मूल्य संग गुणहरु संग पाउन सक्नुहुनेछ जुन धेरै केसहरुमा ब्रान्डले आधिकारिक बनाएको उत्पादनहरु भन्दा बढि पाउन सक्छ र जसको लागि यसले चार्ज गर्दछ म पूरै विवादास्पद मूल्य भन्छु।
अन्तमा, र कमरेड फेडेरिकोले भनेका छन, "यो अपेक्षा गरिएको थियो कि अवशिष्ट ध्यान चाहिने धेरै कम्पनीहरूले यस किसिमको अनैतिक विज्ञापनको लागि प्रयोग गर्दछ" मलाई बेतुसी लाग्दैन। म तपाईंलाई सम्झना गराउँछु कि भर्खरै श्री कुकले भनेका थिए ... "पीसी प्रयोगहीन छैनन् र भ्रमहरूका लागि माइक्रोसफ्ट सर्फेस।" के हुन्छ एप्पल लाई अवशिष्ट ध्यान आवश्यक छ? तिनीहरू सबैले समान गर्छन् र यस मामलामा माथि प्रतिस्पर्धामा यसमा ठट्टा गर्ने प्रत्येक कारण छ।
यी सबै तपाईंलाई एक व्यक्तिले भनेको छ जससँग आईफोन,,,, आईप्याड had छ र अब आईफोन4र आईप्याड मिनी has छ। म स्पष्ट पार्दछु यदि कसैलाई लाग्छ कि म एप्पलको बिरूद्ध एक प्रकारको तालिवान हुँ। एप्पलले के गर्छ राम्रो गर्छ यो धेरै राम्रो गर्छ र म त्यसो भन्छु; उसले के गल्ती गर्छ भने यसले धेरै गलत गर्छ र निश्चय पनि म यो भन्छु।
मेरो "योगदान" को अर्थ भनेको हामीले सूचना केन्द्रमा सूचक देख्छौं जुन स्मार्ट पावर केसले कति ब्याट्री छोड्छ भनेर देखाउँदछ, यो मेरो योगदान होईन, यो वास्तविकता हो र बाँकी केसहरू मोफीबाट बाहेक अन्यले बनाउँदैन । मलाई लाग्दैन कि तपाइँले यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नु भएको छ। अभिवादन र पढ्न को लागी धन्यवाद।
यस क्यालिबर र यस टेक्नोलोजीको मोबाइल खरीद गर्नुहोस्, र ब्याट्रीलाई लामो सास दिनुहोस् ... र रमाईलो कुरा यो हो कि यस समस्याले आईफोनलाई बर्षदेखि हेरिरहेको छ, र स्यामसंगले चार्जर हातमा भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई हाँस्दछ!
एप्पलको ब्याट्रीको साथ अब केहि गर्न छ, धिक्कार!
तिनीहरूले पहिचान गर्नु पर्छ कि आईफोनको स्वायत्तता सबै भन्दा राम्रो होईन।
साझेदारी गरिएका एल्बमहरू Google फोटोहरूमा आइपुग्छन्